Xafiiska Xeer Ilaalinta oo soo bandhigay gargaar laga leexsaday danyar ku nool Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada booliska iyo Nabad Sugidda gobolka Banaadir ayaa degmada Xamar Jajab ku qabtay labo gaari oo siday raashin laga leexasaday dad dan yar ah oo ku nool Muqdisho.
Saldhiga booliiska ee degmada Xamar Jajab ayaa lagu soo bandhigay labadaas gaari oo raashinkii ku raranyahay, iyadoo uu halkaas koogay Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Maxamed Cali Daahir iyo ku xigeenkiisa.
Booliska iyo Xeer Ilaalinta ayaa sheegay in la hayo 4 ruux oo lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen fal-danbiyeedkan.
Ku xigeenka Xeer ilaaliyaha Qaranka, Maxamed Xasan oo warbaahinta goobta kula hadlay saldhiga booliska degmada Xamarjajab ayaa sheegay in ciidanka amaanku ay gacanta ku soo dhigeen dadkii raashiinka gadayay iyo kuwii laga iibinayay isagoo sidoo kale sheegay in kuwo kale ay ciidanka ku raad joogaan sharcigana la horkeeni doono dhamaan.
Maxamed Xasan Nuur oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in arintan ay ku lug leeyihiin dad mas’uuliyiin ah isla markaana ay baaritaan ku hayaan meel wanaagsana uu marayo.
“Guud ahaan dalka Soomaaliya la dagaalanka musuq-maasuqa waa uu ka bilowday, xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka waxaa uu hadda wadaa oo intooda badana gacanta lagu dhigay dad mas’uuliyiin iyo ganacsato isugu jira oo leexsaday raashiinkii loogu talagalay dadka degan Buulo-Burte” ayuu yiri Maxamed Xasan Nuur.
Leexsiga kaalmada dad tabaaleysan ayaa caadi ka noqday dalka Soomaaliya, waxaase haatan muuqata in lagu dabajiro dadka falalkaas ku kaca.